ताकुकोट विद्युत घोटला ः अध्यक्षले बेचे विद्युतको पोल - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
ताकुकोट विद्युत घोटला ः अध्यक्षले बेचे विद्युतको पोल
Published On : २४ बैशाख २०७५, सोमबार १३:३९
दरौँदी ः बारपाक सुलिकोत गाउँपालिका ५ को ताकुमाझ लाकुरीबोट ग्रामिण विद्युत सहकारी संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष ओम गुरुङले विद्युत पोल खरिदमा घोटला गरेको खुलेको छ । गत बैशाख २० गते संस्थाको साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष गुरुङले आफुले विद्युत पोल विक्रि गरेको स्वीकारे समेत गरेका छन् ।
‘मैले विद्युतको पोल फिर्ता लगेर विक्रि गरेकै हो’ ओम गुरुङलाई उदृत गर्दै संस्थाका सचिब ठाकुर भट्टले भने ‘मैले रासनको पैसा लिनु थियो त्यहीबाट लिएको हुँ ।’ अध्यक्ष गुरुङले गौरी पार्वती कन्स्टूक्सन मार्फत ताकुमा ल्याएको २१ वटा विद्युत पोल मध्ये १४ वटा पोल गाउँबाटै फिर्ता लगेर विक्रि गरेको भट्टले जानकारी दिए । स्थानीयका अनुसार गाउँमा पुगेको पोल अध्यक्ष गुरुङले आफ्नो खर्च भएको रकम उठाउन भन्दै १४ वटा पोललाई ट्याक्टरमा ढुवानी गरी बजार लगेर विक्रि गरेका थिए ।
विवादित भएपछि अध्यक्ष गुरुङले पदमाबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । केही वर्ष यता विद्युत पोल सहित अन्य आर्थिक विषयमा समेत उक्त संस्था विवादित बन्दै आएको छ । विद्युत वितरण गरेको सहकारी संस्था २०६२ साल देखि एउटै कार्यसमितिले चलाउँदै आइरहेको छ ।
गत २० गते भएको साधारण सभामा कोषाध्यक्ष अम्बिका थापाले प्रस्तुत गरेको खोस्टे (रफ) प्रतिबेदनमा करिब तीन लाख रुपैँयाको हिसाब किताब हराएको कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुले नै आरोप लगाएका छन् । संस्थाका आर्थिक ब्यवस्थापनको पक्ष सबै भन्दा कमजोर रहेको एक स्थानीयले बताए ।
‘विद्युत वितरणमा भ्रष्टाचार कति छ कति’ नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै एक स्थानीयले भने ‘न मिटर रिडिङ राम्रो सँग रेगुलर गर्छन, न पैसा लिएर रसिद दिन्छन् । यस्तो भएपछि हिसाब किताब कसरी पारदर्शी हुन्छ ।’
उक्त समितिले भूकम्पको बेलामा पोलहरु भाँचिएको ढलेको भन्दै सामुदायिक विद्युतीकरण शाखाबाट आएको पोलहरु किन्ने पैसा समेत कहाँ कति गए भन्ने कसैलाई जानकारी नदिइएको ति स्थानीयले बता ए । ‘विद्युतको पोलहरु ढल्यो भन्दै लिएको पैसा कहाँ गयो थाहा छैन’ अर्का एक स्थानीयले भने ‘केही पैसा तार किन्न खर्च गरेको देखिन्छ । तारहरु किनेर के गर्नु त्यसै अरसल्ल छ । कति पोल कहाँ गयो थाहा छैन ।’ कति पैसा अनियमितता भएको भन्ने समेत स्थानीयलाई पत्तो छैन ।
अनियमिततामा यूवाहरुको हस्तक्षप
स्थानीय यूवाहरुको एक समुहले भने उक्त विद्युत अनियमितता बारे प्रश्न गर्दै खबरदारी गर्दै आइरहेका छन् । गत २० गते भएको साधारण सभामा उनीहरुलाई बोल्न नदिएपछि उनीहरुले कार्यक्रम स्थलमै होहल्ला गरेका थिए । होहल्ला गरेपछि मात्रै यूवाहरु राजु खड्का र राजेन्द्र बस्नेतलाई बोल्न दिइएको थियो । कार्यक्रममा खड्का र बस्नेतले विगतका वर्ष देखि विद्युत वितरणमा भएको अनियमितताको जरो पत्ता लगाएर भ्रष्टाचार गर्नेलाई सार्वजनिक गरेरै छाड्ने बताएका थिए ।